အီရန်စစ်ရေးပြအခမ်းအနားတွင် အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခံရ၊ တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ်သား ရှစ်ဦး သေဆ?? - Yangon Media Group
အီရန်စစ်ရေးပြအခမ်းအနားတွင် အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခံရ၊ တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ်သား ရှစ်ဦး သေဆ??
တီဟီရန်၊ စက်တင်ဘာ ၂၂ – အီရန်နိုင်ငံ အနောက်တောင်ပိုင်း အာဗက်ဂ်မြို့တွင် စက်တင်ဘာ ၂၂ ရက်က နှစ် ပတ်လည် စစ်ရေးပြအခမ်းအနားတွင် သေ နတ်သမားများ၏ အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှု ကြောင့် တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ်ဖွဲ့မှ အ နည်းဆုံး ရှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီး လူ ၂ဝ ဒဏ်ရာ များ ရရှိသွားခဲ့ရသည်ဟု ဒေသန္တရ မီဒီယာ များတွင် ဖော်ပြခဲ့ကြသည်။
ယခု အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုသည် မည်သည့်အဖွဲ့အစည်း၏လက်ချက်မှန်း ကွဲ ပြားစွာ မသိရှိရသေးချေ။ စစ်ရေးပြ အခမ်း အနားသို့ အရပ်သူအရပ်သားများ၊ အစိုးရအ ရာရှိများနှင့် ပရိသတ်များက ဝိုင်းဝန်းကြည့်ရှု နေကြဆဲ အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်ခံရခြင်းဖြစ် သည်။
အီရန်နိုင်ငံတွင် IS အကြမ်းဖက်သမား များနှင့် ခွဲထွက်ရေးသမားများသည် ရေနံပိုက် လိုင်းများအား ဖောက်ခွဲခြင်း၊ လူအုပ်အတွင်း နှင့် စစ်တန်းလျားများအား အကြမ်းဖက်တိုက် ခိုက်ခြင်းများ မကြာခဏ ပြုလုပ်လေ့ရှိသည်။
တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ်ဖွဲ့များအား အကြမ်းဖက် တိုက် ခိုက်ခံရမှုဟု IRNA သတင်းဌာနက ဗီဒီယိုရိုက်ကူးကာ ထုတ် လွှင့်ပြသခဲ့သည်။ ဒေသခံများသည် ¤င်းတို့၏လက်ကိုင်ဖုန်းများ ဖြင့် ရိုက်ကူးထားသော တိုက်ခိုက်ခံရမှုမြင်ကွင်းအား ထုတ်လွှင့် ပြသကြသည်။
”အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခံရတာမို့ စစ်ရေးပြပွဲ ဖျက်သိမ်း လိုက်ရပါတယ်”ဟု သတင်းထောက်တစ်ဦးက မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ ထုတ်လွှင့်လိုက်သည်။
Fars News က ကာကီယူနီဖောင်းဖြင့် သေနတ်သမား နှစ်ဦးသည် မော်တော်ဆိုင်ကယ်ဖြင့် ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွား ပုံကို ဖော်ပြခဲ့သည်။
အီရန်နိုင်ငံတွင် အစ္စလာမ်တော်လှန်းရေးအဖွဲ့မှ အယာ တိုလာခိုမေနီ ၁၉၇၉ ခုနှစ်က ရှားဘုရင်ကို ဖြုတ်ချအာဏာရ ယူလာပြီးနောက် အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများ မကြာခဏ ဖြစ် ပွားလာခဲ့ရသည်။ွ
ရွှေဈေးအတက်အကျ ဒေါ်လာငွေလဲလှယ်နှုန်းနှင့် ဆက်စပ်နေသဖြင့် ဒေါ်လာလေပတ်ကား ရောင်းချနေမှုများကိ??
မလေးရှားတွင် အရက်အဆိပ်သင့်၊ ၂၉ ဦးသေ ဒါဇင်များစွာ နာမကျန်းဖြစ်
၂ဝ၂ဝ ရွေးကောက်ပွဲ အောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်ရေး မဟာဗျူဟာ စီမံကိန်းတွင် ပါတီနှင့် အရပ်ဘက်အဖွ??
ခံစစ်မှူး ခုနစ်ဦးရှိနေသော်လည်း စမောလင်းအတွက်အဲဗာတန်၏ ကမ်းလှမ်းမှုကို မန်ယူပယ်ချခဲ့
ပဲရစ် ရာသီဥတု သဘောတူညီချက် ဆွေးနွေးပွဲများတွင် အမေရိကန် ဆက်လက် ပါဝင်မည်